Ekhaya - Cloud Library
‹ Qonda kukhasimqoka lesiNgisi
Ulimi olusebenza khathesi: isiNdebele
Okutsha - Nkulunkulu, Ungaphi?!
Kuyini i-Cloud Library?
Izinsiza ezitholakala ku-Cloud Library ziyisipho kuwe! Uyakhuthazwa ukuba uzudindise uphindaphinda, uzabele zimemetheke, usebenzise okuphuma kizo kumbe ukwabelana labanye. Khululeka ukuba uphanyeke amabhayisikopo lawa lemfundiso zokulalela kumabonakude we-internet i-Youtube, i-Tudou, Youku lezinye indlela zokuhambisa imibiko ube usufaka isixhumanisi (i-link) seCloudlibrary.org ku-webpage ukuze usize abanye ukuba bathole izinsiza lezi. Thumela ingwalo zamagagasi, ama-eBooks kumalunga ebandla, izifundi zezebhayibhili, abanye abakhokheli labanye abangabusiswa yizinsiza lezi ngolimi lwabo.